Itoobiya oo Bedeleysa Siyaasadii ay 30 sano kula dhaqmeysay Soomaaliya - Awdinle Online
Home News Itoobiya oo Bedeleysa Siyaasadii ay 30 sano kula dhaqmeysay Soomaaliya
Itoobiya oo Bedeleysa Siyaasadii ay 30 sano kula dhaqmeysay Soomaaliya
October 31, 2019 (AO) – Dowladda Federaalka ah ee Dalka Itoobiya ayaa shaacisay in ay isbeddel weyn ku sameyneyso siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo xiriirka Caalamiga ah.
Afhayeenka Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya Nebiat Getachew,ayaa sheegay in siyaasaddii arrimaha dibadda ee ay ku dhaqmeysay Itoobiya 30kii Sano ee la soo dhaafay ay dhacday islamarkaana aysan la jaanqaadi karin Caalamka.
“Maalmaha soo aaddan ayaa lagu dhawaaqayaa isbeddelka siyaasadda xiriirka dibadda Itoobiya, maaddaama 24 sano ka hor dadka Itoobiya ahaayeen 60Milyan haddana kor u dhaafeen 100Milyan”ayuu yiri Afhayeen Nebiat Getachew.
Waxaa kale oo uu Nebiat Getachew, sheegay in Dowlad cusub oo koofurta Suudaan ah ku soo biirtay deriska inta ay shaqeyneysay siyaasaddooda hore ee arrimaha dibadda ee dhacday, in Itoobiya iyo Eritrea ausan col iyo nabad midna ahayn 24kii sano ee la soo dhaafay,siyaasaddii Itoobiya ee Soomaaliya iyo kuwo kale ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya.
Source by: EZEGA.COM
Previous articleMaxaa ka jira in Farmaajo iyo Sheekh Shariif khadka taleefanka ku wada hadleen
Next articleMaxkamada Cadaaladda Dunida oo soo saartay Digniin ku saabsan kiiska badda Soomaaliya